Interviewer: VaChiyangwa, makazvigona sei kuti musvike kuita millionaire?
Phillip Chiyangwa: Ndakarima madomasi 1 million ndikamatengesa dhora dhora.
mari Phillip Chiyangwa
Mu Zimbabwe zviri kufaya nema Anointing Oil
Boss ane anointing oil yake kuti vashandi vanzwisise,mushandi aneanointing yake kuti boss vanzwisise.Mwana wechikoro aneanointing pen,mudzidzisi aneanointing pen and anointing oil yake kuti ave nevana vanogona. Vasikana varikuno vaneanointing oil yerudo,vakomana vaneanointing oil yekunyenga.Mbavha dzine anointing oil yekuba,vanobirwa anointing oil yekusabirwa.Varimhiri muchadzidza zvakawanda December uno kana mauya
church pentecostal prophet magaya prophet makandiwa
mukomana musikana chelsea fc 2015-16
Zimbabwe yakachipa kufona kana uri ku Gehena
Mubritish, muamerican nemuzimba vakafa vakaenda kugehena.
Akatanga mubritish akada kufonera vanhu vake vekuUK kuti anzwe kuti vasara sei. Akapiwa akafona 5minutes apedza akabvunza kuti imarii satani akati $5million ndokukumbira computer kuti atransfer mari yacho.
Tevere muamerican kusada kusarira akafona 15minutes kwakubvunza kuti imarii satani akati 15million akamunyorera cheque.
Muzimba akafonera vanhu vake akataura 48hrs kwakubvunza kuti imarii satani akati $1, muzimba akachibvunza kuti chii chikonzero? Zvikanzi naSatani kana urikugehena uchifonera Zimbabwe zvakachipa coz iLocal.
nhamo zimbabwe pentecostal satan
Chinoz vachitaura nezve mutongo wa Gumbura
Reuben Barwe: Achinotimba munotii nemutongo waGumbura 40 yrs pakubata rape kwaakaita?
Chinoz: Aaa kana vachiti kubata rape 40 yrs, ko isu tinoirima a bva kufira mujeri. Ini pandakazvinzwa kuti Gumbura apiwa 40 yrs pakubata rape ndakabva ndatoitema,ikozvino ndorima tsunga, covo, muboora nechembere dzagumhana nezvimwe zvakadaro kwete rape ndofira mujere. Kana kubata kuchiita 40 yrs kuzoti kuirima.
chinoz zbc reuben barwe jere gumbura chibharo muriwo
Ingadayi yava dhora fifty
Sekuru vakatuma muzukuru ne50cents kundotenga coke. Muzukuru ari munzira mari yakabva yarasika ndokutsvaga asi akayi shaiwa.
Gare gare sekuru vakaita follow up ndokuwana mzukuru achingo zeya zeya ndokubvunza kuti zvaita sei, zvikanzi "mari yarasika". Sekuru vakabva vatanga kupopota vachirova mzukuru zvakaita kuti apedzisire akudzorerawo.
Vari mutsumburumbu iyi, pakabva pasvika pastor zvikanzi munorwirei ndobva vaudzwa. Zvikanzi na pastor "mungarwira 50cents?", vachibva vapa $1 kuna sekuru.
Pastor vava kuenda, vakangotii fambei zvishoma nyonga nyonga ndobva yatangazve! Zvikanzi zvaita sei futi? Sekuru vakabva vati "mzukuru arasa coin rangu!" Pastor vakabva vati "inga ndakupai $1 wani?"
Sekuru vaya vachibva vati "Ingadai yave $1.50"
pastor nhamo bond coin us dollar rand
hure chikomba baba mai
Muzukuru ugotiunziravo Chelsea
Muzukuru: gogo ndikuya kumusha ikoko mangwana.munoda kuti ndikuunzirei chii nhai gogo.
Gogo: unongouya nezvaunosindiunzira muzukuru asi uwedzere necheresia yandangonzwa nembiri yekudyika tigoiravirawo
gogo muzukuru chelsea fc 2015-16
Sisi vebasa pa whatsapp profile picture
Amai vakachinja profile pic kubvisa yababa kwakuisa ya pastor.
Baba: ko chave chii zve pa pro pic?
Amai: ndawona kuti pastor vanotinamatira misi nenguva mazuva ose saka ndati ndivaisei paprof pic apa..
Baba ndokuti zvakanaka. Baba vachibva vachinjawo ndokuisa remusikana webasa (house girl). Amai vachinodai pa App yababa wanikwe pa prof pic pave na sisi.
Amai: zvaita sei chii chandirikuona ichi?
Baba: ndawona kuti sisi vanotiira zvose, kubika, kuwacha zvese nekuchengeta vana isu tirikubasa. ndawona zvirinani ndimbovaisa paprofile pic pangu
mukadzi murume pastor sisi sisi vebasa whatsapp whatsapp status
Ma stands ari kutengeswa
Mozoti hatina kukuudzai kuti kune mastands arikutengeswa. Panodiwa proof of residence, id card, bank statement deposit $50 wonoratidziwa stand yaunoda! Ingave candle stand, solar stand TV Stand zvose zvirimo nemaRadio stands
Bond coin ne rand pa tuckshop
Wotosvika paTuckshop uchida maheu wobvunza kut imarii zvobva zvanzi 5rand iwe neconfidence wobudisa 5 rand yacho.
Ndipo paunonzwa zvonzi aah mari idzi hatisi kutambira mazuva ano dzirikuzotinetsa. Tirikuda mabond. Wotoshaya kuziva kuti bond rakazoita rand riinhi?
Ndopaunozoona kut zvidzidzo zvegore rino ukaita zvekutamba unofoira.
zviri kufamba sei nhamo zimbabwe bond coin
kare mari yaitenga chaizvo!
Unonzwa vakuru vachiti kare mari yaitenga chaizvo! Ende zvinhu zvanga zvakanaka! Asi chinoshamisa ndechekuti unonzwa vachiti taienda kuchikoro nemangayi, maheu, kudya sadza nemhodzi dzemanhanga...
Unotoshaya kuti mari yacho yaitenga mangayi here.
mari nhamo gore rezvidzidzo
Bhavhadheyi rako unosheya nani
Ndeupi wauno sheya naye mwedzi wawakazvarwa nawo apa?
January - Magaya
March - Tsvangirai
Aprill - Gumbura
June - Mai Chisamba
July - Jah Praizah
August - Chinotimba
September - Macheso
October - Zhakata
November - Vharazipi
December - Makandiwa
Then wauno share naye ndoyava nickname yako!
chinoz gumbura mai chisamba vharazipi Robert Mugabe prophet magaya Macheso
Tsivo - sahwira akandirega ndichi chata newe
Wife: Nhai baba Choklate, madini kuyambira shamwari yenyu iri kuchata next week kuti mukadzi waari kuchata naye haaite, ihure, huchapa futi ane makuhwa!
Husband : Ndinomuudzirei? Its a pay back time! Iye akandiregera ndichichata newe wani
mukadzi hure murume muchato